Ra'iisul Wasaaraha Sudan Hamdok Ayaa Ku Hanjabay Inuu Xilka Ka Tagayo » Axadle Wararka Maanta
Ra’iisul wasaaraha Sudan Hamdok ayaa ku hanjabay inuu xilka ka tagayo
Khartoum – Ra’iisul wasaaraha Sudan Abdalla Hamdok ayaa xilka ka tagi doona haddii heshiis siyaasadeed oo uu todobaadkii hore la saxiixday milatariga la dhaqan gelin waayo ama uu ku guuldareysto inuu taageero ka helo dhinacyada siyaasadda, sidaas waxaa sheegay ilo ku dhow dhow Arbacadii.
Hamdok ayaa laga sii daayay xabsi guri waxaana dib loogu soo celiyay shaqadiisa heshiiskii la gaaray Noofambar 21, afar todobaad kadib markii laga saaray ciidan la wareegay.
La wareegitaanka ayaa soo afjartay heshiiskii awood qeybsiga sanadka 2019 ee u dhaxeeyay militariga iyo kooxaha siyaasadeed ee ku lugta lahaa afgambida hogaamiyihii hore Cumar Al-Bashiir. Kooxahaas ayaa diiday heshiiska, sidoo kale waxaa diiday guddiyo iska caabin ah oo abaabulay olole mudaaharaad ah.
Mudaaharaadyadii ugu dambeeyay, Talaadadii, waxay tobanaan kun oo qof ku soo dhaweeyeen bartamaha Khartoum iyagoo halkudheggiisu ahaa “Lama wadaagi karo, gorgortan ma jiro, wax tanaasul ah ma jiro”.
Mudaaharaadyo dheeraad ah ayaa la qorsheeyay Diseembar sanadguurada muhiimka ah ee laga soo bilaabo 2018 ee mudaaharaadyada ka dhanka ah Bashiir.
Dadka ka soo horjeeda ayaa sheegaya in heshiiska afgambiga ka dib uu u xaglinayo militariga in loo daayo taliyaha ciidamada xoogga dalka, oo ah Golaha Sare ee loogu talagalay in loo gudbiyo maamulka rayidka.
Heshiisku wuxuu u ogolaanayaa Hamdok inuu soo magacaabo gole wasiiro oo cusub oo tignoolajiyadeed, wuxuuna ku baaqayaa in la sii daayo maxaabiista siyaasadeed iyo baaritaannada lagu hayo mudaaharaadyada oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in 43 qof ay ku dhinteen.
Hamdok ayaa sheegay in uu saxiixay heshiiska lagu joojinayo dhiiga daadanaya laguna ilaalinayo taageerada dhaqaale ee caalamiga ah ee aadka loogu baahan yahay.
Arbacadii Xamdook waxa uu soo saaray wareegto uu ku bedelayo inta badan koox wasiir ku xigeeno ah oo ay ciidamadu ku rakibeen afgambiga ka dib. Wareegtada laguma soo darin wasaaradaha maaliyadda, xeerka federaalka, iyo warfaafinta.
Golaha dhexe ee Dhakhaatiirta Suudaan ayaa sheegay Arbacadii in 98 qof ay ku dhaawacmeen maalintii hore, gaar ahaan kuwa ka soo baxa sunta dadka ka ilmeysiisa iyo bambooyinka gacanta laga tuuro. Kooxdan oo la safan dhaq-dhaqaaqa mudaaharaadka ayaa sidoo kale sheegay in dhakhaatiirtu ay dareen xoog leh ka heleen sunta dadka ka ilmeysiisa ee maalintii la isticmaalay.
Telefiishanka dawladda oo soo xiganaya booliska ayaa sheegay in ay jiraan kiisas qaar oo ku dheggan sunta dadka ka ilmeysiisa iyo dhaawacyo ka dhashay dadka oo buux dhaafiyey, waxaana la xidhay 44 qof.
Inta badan siyaasiyiinta caanka ah ee la xiray afgambiga ka dib ayaa la sii daayay, inkastoo qareenada ay sheegeen in dad badan oo mudaaharaadayay ay wali xiran yihiin.
(This story #Ra'iisul wasaaraha Sudan Hamdok ayaa ku hanjabay inuu xilka ka tagayo. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.